इटहरीमा अपांगता सञ्जाल गठन | रेडियो झापा 100.7 MHz.
इटहरीमा अपांगता सञ्जाल गठन
रेडियो झापा 100.7 MHz. बुधबार, चैत्र ०४, २०७७ १७:२४:१४
सुनसरी । इटहरी उपमहानगरमा इटहरी अपांङ्गता सञ्जाल गठन भएको छ । दिलकुमारी राईको संयोजकत्वमा संजाल गठन भएको हो । सञ्जालको उपाध्यक्षमा रमानन्द खत्वे, सचिव रामु कार्की, सहसचिव रामबहादुर भुजेल र कोषाध्यक्ष रिता पौडेल रहनुभएको छ ।
सञ्जालमा इटहरीको २० वटै वडावाट प्रतिनिधित्व रहेको छ । अव इटहरीका प्रत्येक वडाहरुमा अपांङ्गताभएका ब्यक्तिहरुलाई संगठित गर्दै वडा मिलिजुली समूह गठन गरिने र त्यसलाई टोलहरुमा समेत विस्तार गरिने इटहरी उपमहानगरकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
इटहरीमा अपांङ्गता सम्वन्धि योजना तर्जुमा, कार्यावन्यन र अनुगमनमा समेत अपांङ्गता भएकाहरुलाई सहभागिता गराउन टोल टोलसम्म समूह गठन गर्न लागिएको छ । इटहरी अपांङ्गता संजालले इटहरी उपमहानगरमा संचालित अपांङ्गता रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यावन्यनमा सहयोग पुरयाउने छ । अपांङ्गताभएकाहरुको पहिचान गरि उहाँहरुलाई शीप सिकाएर क्षमता विकास गर्दै आत्मनिर्भर वनाइने उपप्रमुख गौतमले वताउनुभयो ।